Warbixin Kooban Oo Ku Saabsan Taariikhda Garoonka Muqdisho – Garsoore Sports
Warbixin Kooban Oo…
Garoonka kubbadda cagta Muqdisho oo ah guriga xulka qaranka Soomaaliya, waxaa la dhisay sannadka markuu ahaa 1977-kii waxaana dalka Soomaaliya u dhistay dowladda Shiinaha.
Garoonku wuxuu marti geliyay cayaaro badan oo isugu jira kuwo qaaradeed, kuwo heer caalami ah, cayaraha bariga iyo bartamaha Africa iyo sidoo kale cayaaraha Carabta. Cayaartii ugu horreysay ee lagu qabtay garoonka Muqdisho waxay dhexmartay qaranka Soomaaliya iyo koox ka socotay dalka Shiinaha oo la yiraahdo Leonen, waxaana ay ahayd cayaartii lagu furay garoonka. Sidoo kale tartankii CECAFA ee ugu horreeyay ee garoonka lagu qabtay wuxuu ahaa koobka qaramada ee CECACA.
Markii dagaalladu ay ka qarxeen dalka Soomaaliya sannadkii 1991-kii, garoonka Muqdisho wuxuu kamid noqday xarumo muhiim ah oo dagaalada ku xirmay ama ku burburay. Mudadii u dhexeysay 1993-1995-kii waxaa garoonka daganaa oo isaga dambeeyay ciidamadii Mareykanka iyo kuwii Pakstan ee dalka Soomaaliya u joogay howlgalkii nabad ilaalinta ee fashilka ku dhamaaday.
Ugu dambeyn waxaa ciidamada AMISOM ay garoonka isaga bexeen 28-kii Agoosto sannadkii 2018-kii xilligaas oo ay ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliyeed la wareegeen amaankiisa. Dib u dhis ayaa dhowaan lagu sameeyay garoonka wuxuuna dib ugusoo laabtay gacanta shacabka iyadoo loo adeegsanayo ujeedooyinkii markii hore loo dhisay oo ahaa in lagu horumariyo kubbadda-cagta Soomaaliya.
RASMI: Barcelona Oo Ku Dhawaaqday Saxiixa Memphis Depay